Magaca Gabadh ciidamada Woyanuhu Tuulada Labiga ku Kufsadeen kadibna dileen. | ogaden24
Magaca Gabadh ciidamada Woyanuhu Tuulada Labiga ku Kufsadeen kadibna dileen.
Jan 19, 2017 - Aragtiyood
Wararka nagasoo gaadhaya gudaha Ogadeniya gaar ahaana gobolka jarar ayaa waxay sheegayaan in ciidamada gumaysiga Itoobiya ay gabadh shacab ah isugu dareen kufsi iyo gawrac duleedka tuulada labiga ee ka tirsan magaalada dhagaxbuur ee gobolka jarar.
Gabadhan ayaaa waxaa shalay mayd keedii oo la gawracay laga helay in ta u dhaxaysa buurta sabati iyo tuulada labiga gabadhan ayaa waxaa magaceeda naloogu sheegay Ayaan Biixi.
Gabadhan la dilay ayaa waxaa la sheegay in qaar kamid ah ciidamada gumaysiga Itoobiya ay damceen inay shukaan sadaan kadib markii ay diidayna ay isugu dareen kufsi iyo gawrac masii bada kale ee kasi daran ayaa waxay tahay in ciidamada gumaysiga Itoobiya ay ehelki gabadha ku dhahaan gabadhiinii waxaa cunay waraabe iyagoo doonaya in ay uus xabaalaan gabadha.
Ciidamada gumaysiga Itoobiya ayaa waxay sii laban laabeen tacadiyadii ay ku hayeen dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan waxaana marba marka ka danbaysa kasii daraysa xaalada dadka rayadka ah ilaahay waxaan uga baryaynaa in uu ka dulqaado shacabka Soomaalida Ogadeniya dhibaatada, gabadhana waxaana ilaahay uga baryaynaa inuu naxariisti jano ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadiina uu samir iyo iimaan ka siiyo.